Shina : Ilay vola fahatsiarovana ny lalao olaimpika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2008 9:21 GMT
Namoaka vola 10 Yuan (tokotokony ho 1.46) ho fahatsiarovana ny Lalao olaimpika any Beijing ho avy amin’ny volana ambony io ny Banky Foibe, People's Bank of China (PBOC na Bankim-bahoakan’i Shina). Raha mbola tsy mbola tonga eny ampelatanan’ny mpanangona azy akory ilay vola dia efa nanondro « fahadisoana » eo amin’ny saokan’ilay vola navoaka manokana sahady ny mpamaham-bolongana Naughty Lion (顽皮的狮子na Liona maditra), ary niteraka adihevitra vaovao teo amin’ny tontolon’ny serasera Shinoa:
Ny vola taratasy ho fahatsiarovana ny lalao olaimpika faha-29 navoakan’ny banky foibe tamin’ny 8 jolay 2008 no vola voalohany indrindra manerantany miompana amina Lalao olaimpika, nefa dia vitsy indrindra ihany koa ny isam-bola navoaka, fa dia miisa 6 000 000 monja. Ifandrombahana tokoa izy ity manerana ny firenena hany ka maro no tsy nahavidy azy akory na dia nilahatra nandritra ny fotoana lava dia lava aza. Ankehitriny kosa (13 jolay) dia efa nidangana hatrany amin’ny 50 avo heny ny vidiny eny an-tsena.
Tena nanam-bintana tokoa aho raha miohatra amin’ny ankamaroan’ny olona. Nankany amin’ny biraoko aho hivory androany maraina amin’ny ora Amerikana tavaratra io. Avy eo, niantso tany amin'ny banky aho ka nandre fa efa mivarotra ilay vola taratasy ny banky any ambany rihana. Nankeny amin’ny solotohatra avy hatrany aho, nihazakazahaka ho eny efitra lehibe fandraharahan’ny banky … Faly sy nientanentana tokoa aho na dia nisefosefo sy voatositosika tanaty vahoaka aza – Nahazo iray aho ry zareo a!!
Araka ny filazana faha-11 navoakan’ny banky foibe, dia nahafatifaty ahy tokoa ity vola taratasy fahatsiarovana ity, mampilendalenda sy maneho fivoarana. Tsara noho ny hajian’ny Akanim-Borona manko ny haitao isorohana ny fanaovana hosoka nanaovana azy ity!
Saingy nahita fahadisoana goavana ihany aho. Tena mihantsy tokoa ilay izy. Tokony hitandrina kokoa ireo mpandalina ny haikanto!
Jereo anie eo amin'ny saokan’ny vola. Aiza moa no misy ny Tempolin’ny Lanitra?—- Eo ambanin’ny Akanim-Borona!!! Tena tsy mety kosa io e!!!! Jereo tsara anie ny sary (jereo ao amin’ny lahatsoratra nadika).
Misy an’io tsy fetezana io ihany koa ny vola maodely (atao afisy ?).
Etsy ankilan’izany, soa ihany fa 6 000 000 ihany ny fitambaran’ny vola natonta, saingy ny laharan’ny vola maodely anie ka 10 000 009 e ! Tena efa nahatratra 10 000 000 tokoa ve ny vola naely ?
Mbola mila fanavazavana bebe kokoa ireo voalaza eo ambony ireo.
Novalian’ny fampahalalam-baovao lehibe bontana malaky tokoa ny fanamarihan’i Naughty Lion (Liona maditra), ary anisan’izany ny Masoivohom-baovao Xinhua, izay nilaza fa fanasarotan-javatra hanorisorenana fotsiny ny fanamarihan’ilay mpiserasera, ary dia namaly ihany koa ny sasany fa fomba fiarovana amin’ny hosoka ihany ilay « fahadisoana », nefa dia tsy nilaza na inona na inona momba io mihitsy filazalazana ofisialy momba ny vola.
Fa ny tena mahaliana, notakonan’ny blog.sohu.com, iray amin’ny Vavahady mampiantrano bolongana lehibe any Shina ny lahatsoratra voalohany navoakan’i Liona maditra, raha naka sary ny bolongany sy mitsikera ny « fitsongolohana antsipirianjavatra hitany » kosa ireo fampahalalam-baovao lehibe.
Amin’izao fotoana izao dialasa soratra tahaka izao no hita eo amin’ny lahatsoratra voalohany nosoratan’i Liona Maditra “Efa notakonana ny lahatsoratra”
Namoaka fanindroany ny lahatsorany manontolo ao amin’ny sohu blog izay tena nanintona i Naughty Lion (Liona maditra) ary mbola nijoro tamin’ny heviny hatrany ao amin’ny lahatsoratra hafa:
Ny lahatsoratro Nivandravandra ny fahadisoana ao amin’ny vola ahatsiarovana ny lalao olaimpika; miandry fanazavana hatrany nosoratako omaly dia nanitrikitrika fa natonta tao ambanin’ny Akanim-Borona ny tampon’ny Tempolin’ny Lanitra hita eo amin’ny saokan’ny vola ahatsiarovana ny lalao olaimpika. Nanahy aho fa fahadisoana eo amin’ny fandravahana na haikanto io ; na izany aza sambany vao nandray ny lalao olaimpika i Shina. Nahafinaritra ahy tokoa fa liana tamin’izay nosoratako teto amin’ny bolongako ny olona sy ny fampahalala-baovao lehibe. Tsapako tokoa ny hafanamponareo amin’ny lalao olaimpika ! Mankasitraka tompoko !
Na dia notakonan’ny orinasa sohu aza ny lahatsoratro dia mino aho fa vonjimaika ihany izany. Na izany na tsy izany, nilaza ny marina aho ary antenaiko fa tsy manana olana ny vola fahatsiarovana ny lalao olaimpika.